फूलमाया र कृष्णप्रसाद अझै तुइनमा झुन्डिरहेका छन्, किन? :: Setopati
फूलमाया र कृष्णप्रसाद अझै तुइनमा झुन्डिरहेका छन्, किन? सरकारी तथ्यांक नै भन्छ- अझै एक वर्ष तुइन विस्थापित हुँदैनन्
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, साउन २२
दुई दिनअघि लमजुङमा तुइनको लठ्ठा छिन्दा दोर्दी गाउँपालिका-६ कीर्तिपुरबेंसीकी ३२ वर्षीया फूलमाया गुरूङ बेपत्ता भइन्।
जनैपूर्णिमाका दिन जलदेवी मन्दिरमा पूजा गर्न तुइन चढेर दोर्दी खोला तर्दै गरेकी गुरूङ अझै भेटिएकी छैनन्। उनीसँगै तुइन चढेका १७ वर्षीय विकास घले सामान्य घाइते छन्। छिनेको तुइनको लठ्ठा समातेर उनी किनारमा उत्रिएका थिए।
फूलमाया तर्न खोजेको तुइन जीर्ण भइसकेको थियो। तुइन विस्थापन गरेर झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने योजना परे पनि काम सकिएको छैन। झोलुंगे पुल बनाउन गण्डकी प्रदेशले ५८ लाख बजेट दिएको छ।
‘झोलुंगे पुल बनाउने भनेपछि तुइन भत्काइएको थियो। धरापजस्तै थियो,’ गाउँपालिका उपाध्यक्ष दिलबहादुर घलेले भने, ‘पुल बनाउने टोलीले सामान ओसारपसार गर्न तुइन बनाएछन्। त्यही तुइनबाट खोला तर्दा लठ्ठा छिनेछ।’
यहाँ कहिले पुल बनिसक्छ थाहा छैन।
यस्तै घटना साउन पहिलो साता मकवानपुरमा भएको थियो।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ लालझाडीका ७७ वर्षीय कृष्णप्रसाद पराजुलीको साउन ७ गते तुइनबाट खस्दा मृत्यु भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक इन्द्रबहादुर रानाका अनुसार पराजुली पारिपट्टी खेतमा जान लाग्दा तुइनमा एउटा खुट्टा राखेका मात्रै थिए अर्को खुट्टा राख्ने क्रममा चिप्लिएर लडेका हुन्।
फूलमाया र कृष्णप्रसादजस्तै कामका लागि तुइनमा झुन्डिएर जानु पर्ने अवस्था देशका अरू ठाउँमा पनि छ।
केपी शर्मा ओली २०७२ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा दुई वर्षभित्र देशभरिका सबै तुइन हटाएर तिनका ठाउँमा झोलुंगे पुल हाल्ने घोषणा गरेका थिए। २०७२ माघ २८ गते ओलीले २०७४ साउन १ गतेपछि देशभरका कुनै नदीमा तुइन देखिए फोटो खिचेर सिंहदरबारमा ल्याउन चुनौतीसमेत दिएका थिए।
त्यसयता ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने। उनको तुइनको तस्बिर खिचेर सिंहदरबार ल्याउन भनेको पनि पाँच वर्ष बितिसक्यो। तर तुइन चढ्दा ज्यान गुमाउनु पर्ने फूलमाया र कृष्णप्रसादहरूको नियति फेरिएको छैन।
प्रधानमन्त्रीले पटक-पटक तुइनमुक्त गर्ने घोषणा गरेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विभाग सस्पेन्सन बृज डिभिजन श्रीमहल पुल्चोकले तुइन विस्थापन विशेष कार्यक्रम नै ल्यायो।
डिभिजनको प्राथमिकतामा रहेको तुइन विस्थापन गरी झोलुंगे पुल बनाउने योजना अझै एक वर्षमा पुरा हुने छाँटकाँट छैन।
‘एक सय ८८ वटा तुइन हटाएर झोलुंगे पुल बनाउनु पर्नेमा अहिलेसम्म एक सय २८ ठाउँमा तुइन हटाएर पुल बनिसके,’ डिभिजनका इञ्जिनियर दिनविनोद खड्काले सेतोपाटीसँग भने, ‘१४ वटा पुल निर्माणाधीन छन्। एउटा पुल निर्माण गर्ने सहमति भारतले दिएको छैन। ४५ स्थानका तुइन फालेर पुल बनाउन मिल्ने अवस्था छैन।’
तुइन विस्थापनका काम धमाधम भइरहेको भन्दै उनले यो वर्षको अन्तिमभित्र १४ वटा पुल निर्माण सकिने जानकारी दिए।
देशका विभिन्न जिल्लामा ४५ स्थानमा तुइन विस्थापन गरेर पुल बनाउने अवस्था नरहेको उनले बताए।
‘स्थानीय बासिन्दाले जताततै तुइन राख्छन्। तुइन राखेपछि सकारले पुल बनाइदिन्छ भन्ने स्थानीयलाई लागेको छ,’ उनले भने, ‘आफूखुसी तुइन हाल्दा दुर्घटना हुन्छ। मानिस मर्छन्, घाइते हुन्छन्, पुल किन नहालेको भन्दै दोष हामीलाई आउँछ।’
‘कतै पानी नाप्न जानमात्रै तुइन राखिएको रहेछ। त्यहाँ पुल बनाउन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘तुइन रहेका तलमाथि पुल बनाउने योजनाअनुसार काम भइरहेको छ।’
यस वर्ष चैतभित्र सस्पेन्सन बृजबाट १२ र स्थानीय तहबाट २ गरी १४ वटा झोलुंगे पुल बन्ने उनले जानकारी दिए।
गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत कालीगण्डकी मख्खुफाँटमा पुल निर्माण सकिने उनले बताए। यो पुल रतनपुर २ गडमारी र कोटा २ तनहुँ जोड्ने हो। २०७३ मंसिर २२ मा सम्झौता भएको यो पुल चैतसम्म निर्माण सकिनेछ।
सबैभन्दा धेरै कर्णालीमा तुइन विस्थापन गरी पुल निर्माण भइरहेका छन्। खड्काका अनुसार सात वटा पुल यस वर्ष कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा निर्माण सकिनेछ।
सुर्खेतमा भेरी नदीमाथि साबिकको तातोपानी-९ चाम्री र तरंगा-४ कुटा जोड्ने झोलुंगे पुल बनिरहेको छ। यो पुल बनाउन २०७४ साउन २७ गते सम्झौता भएको थियो।
सुर्खेतकै गल्फाघाटमा भेरी नदीमाथि तातोपानी-६ गल्फा र घाटगाउँ-९ चौतिरवा जोड्ने पुल पनि बन्दै छ। सुर्खेतकै बुगाडघाटमा कर्णाली नदीमाथि तरंगा-१ र कैलालीको साबिकको सुँगरखाल-९ जोड्ने पुल २०७३ माघ २३ गते निर्माण सम्झौता गरे पनि अहिलेसम्म निर्माण सकिएको छैन।
हुम्लाको नाल्ला छिप्रामा कर्णाली नदीमाथि नाल्ला र खार्पु जोड्ने पुल २०७६ भदौ ३१ गते सम्झौता गरेर निर्माण सुरू गरिएको हो। यो पुल निर्माण सकिने म्याद नै २०७८ भदौ २४ छ।
हुम्ला बोक्चेगौडामा कर्णाली नदीमाथि बोक्चे र करंगा जोड्ने पुल पनि २०७६ भदौ ३१ देखि निर्माण सम्झौता भएको थियो। यो पुल पनि अर्को वर्ष भदौ २५ गते बनाइसक्ने म्याद छ।
दैलेख/अछामको लोप्रे भन्ने ठाउँमा कर्णाली नदीमाथि तुर्माखाँद-३ अछाम र चामुण्डाविन्द्रासैनी-७ दैलेख जोड्ने पुल २०७६ कात्तिक २७ मा सम्झौता गरी निर्माण सुरू गरे पनि अहिलेसम्म सकिएको छैन।
स्थानीय तहबाट टिबिएसु संस्थाको प्राविधिक सहयोगमा यो पुल निर्माणाधीन छ।
दैलेखको अम्लाटारिया पाल्तडामा कर्णाली नदीमाथि चामुन्डा विन्द्रासैनी जोड्न बनाइएको पुल अझै निर्माण सकिएको छैन। यो पुल निर्माण गर्ने सम्झौता गत वर्षमात्रै भएको थियो।
सुदुरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पनि तुइन विस्थापन गरी पुल निर्माणका काम भइरहेको इञ्जिनियर खड्काले बताए।
बझाङको इगुल्बारेमा इगुलबारे नदीमाथि इमल्दार-६ र काँडा-६ गुदमुदे जोड्ने पुल २०७३ माघ २३ गते सम्झौता गरेर बनाउन थाले पनि अझै सकिएको छैन।
नेपाल र भारत जोड्ने दार्चुलाको महाकालीमाथि चार वटा पुल बनिरहेका छन्। दार्चुलाको बरतीमा महाकाली नदीमाथि भारत र बर्तीघाट सनसेरा ४ जोड्ने पुल निर्माण गर्न २०७६ भदौ १६ सम्झौता भएको थियो। यो पुल आउँदो फागुनमा निर्माण सकिने उनले बताए।
दार्चुला बाँकुमा महाकाली नदीमाथि भारत र बाँकु-१ जोड्ने पुल २०७६ भदौ २३ मा सम्झौता गरेर निर्माण थालिएकोमा फागुनमा निर्माण सकिने खड्काले बताए।
दार्चुला बडुगाउँमा महाकाली नदीमाथि भारत र हुती जोड्ने पुल २०७६ भदौ २३ मा सम्झौता भएर निर्माण सुरू गरिएकोमा यो वर्षको अन्तिमसम्म निर्माण सकिने उनले बताए।
खड्काले दिएको जानकारीअनुसार दार्चुला मलमा महाकाली नदीमाथि भारत र राल्पा जोड्ने पुल गत वर्ष भदौ १६ मा सम्झौता भएर यो वर्ष फागुनभित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी काम भइरहेको छ।
प्रदेश नम्बर १ को संखुवासभा अप्सुरा खोलामा अप्सुरा र मकालु १ खडेला जोड्ने पुल गत वर्ष मंसिरमा निर्माण सम्झौता भएको हो। यो पुल पनि यसै वर्षभित्र निर्माण सकिने खड्काले जानकारी दिए। स्थानीय तहबाट टिबिएसुको प्राविधिक सहयोगमा यो पुल निर्माणाधीन छ।
तुइन कहाँ छन् भन्ने पहिचान गर्न नसक्दा पुल निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको पाइएको छ।
गृह मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आठ ठाउँमा तुइन विस्थापन गरी पुल निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै डिभिजनलाई भनेको थियो।
गृहले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार संखुवासभा अप्सुखोला, दैलेख आम्लाटारिया, अछाम लोप्रे, अछाम अशाराघाट, अछाम कोल्लीमोरा, हुम्ला दुल्ली, हुम्ला छिप्रा र हुम्लाकै गोप्चेगौंडामा पुल बनाउनुपर्ने बताएको थियो। यी स्थानमा पुल निर्माणका काम भइरहेका छन्।
इन्जिनियर खड्काका अनुसार बैतडी पञ्चेश्वरघाट र भारत जोड्ने महाकाली नदीमाथि पुल निर्माण गर्ने काम अगाडि बढेको छैन। भारत सरकारले अनुमति नदिँदा त्यहाँ पुल बनाउने काम सुरू गर्न नसकिएको उनले बताए।
‘बैतडी पञ्चेश्वर ७ र भारत चम्पावत जोड्ने महाकाली नदीमाथि तुइन विस्थापन गरी पुल निर्माण गर्ने काम अगाडि बढेको छैन। भारत सरकारको सहमति कुर्दैछौं,’ उनले भने।
यसअघि भारत सरकारले दार्चुला र भारत जोड्ने चार वटा पुल निर्माणमा भने सहमति दिएको थियो। २०७५ माघ २ मा भारतले सहमति दिएपछि नेपाल भारत सीमा जोड्ने दार्चुलामा चार वटा पुल निर्माणाधीन छन्।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन २२, २०७७
ललितपुर सडकको हरियो रङमा अब साइकल सरर (भिडिओ)
कोही मानिस अरूप्रति किन क्रुर हुन्छन्?
आयल निगमको रुपन्देही डिपोभित्र ट्याङ्करमा आगलागी
दसैंमा कुर्ती लगाउने सोच्दै हुनुहुन्छ? यी हुन् सदाबहार ५ डिजाइन
कस्तो मासु खान हुन्छ? कस्तो खान हुँदैन?
भष्मासुरी प्रवृत्तिबाट जनताले उन्मुक्ति चाहिरहेका छन्: पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह
सरकारले पाँच दिन कोरोनाबारे प्रेस ब्रिफिङ नगर्ने
काठमाडौं उपत्यकामा थप एक हजार ५ सय ५२ जनामा कोरोना संक्रमण
बुटवलमा थप एक जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु
दशा नबनोस् दशैँ तेजबहादुर पाख्रिन
के नाता पर्छौ? देवेन्द्र पौडेल